သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးမှ ၈ လတာအတွင်း တပြည်လုံး လူမျိုးဘာ သာမရွှေး လိုအပ်သည့် နေရာများတွင် ဆန် ၅၁,၈၀၁ တင်း၊ ပဲဆီ ၄၃,၈၃၅ ပိသာ လှူဒါန်းခဲ့ – CharTake
သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ အခက်အခဲများ စတင် ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် အခြေအနေကို မှန်းမျှော်တွေးဆလျှက် ၈ လ အတွင်းတွင်
၁။ မူစလင် သက်ကြီးဂေဟာ အဖိုးရိပ်သာ (၃၃ဦး) ရန်ကုန်မြို့ သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၂။ မူစလင် အဖွားများ သုခရိပ်သာ ( ၄၃ ဦး) ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၃။ ကက်သလစ် သီလရှင်များတည်ထောင်သော ဘိုးဘွားရိပ်သာ (၁၉၅ဦး) ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀အိတ်။
၄။ ဟိန္ဒူ လုမ္ဗနီ ဘိုးဘွားရိပ်သာ (ထမလုံ) (၅၅ဦး) သံလျှင်မြို့သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၅။ ဆည်းဆာရိပ် ဂိလာနဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၆။ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀၀ အိတ်။
၇။ သဘာဝတရားရိပ်သာ၊ (၂၈၃၀ဦး) သံလျှင်မြို့ သို့ ၁၀၀၀ အိတ်။
၈။ မေရီချပ်မင်းဆွံ့အနားမကြားကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ -၂၅၀ အိတ်။
၉။ အင်းစိန် ခဝဲခြံ မျက်မမြင်ကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၁၀။ ဦးလှထွန်း ကင်ဆာဖေါင်ဒေးရှင်း၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၀၀ အိတ်။
၁၁။ မြင်သာမြို့ဦး ပရဟိတ အထက်တန်းကျောင်း၊ (၁၈၆၀ဦး)၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ၄၅၀ အိတ်။
၁၂။ ရွှေမင်းသား မသန်မစွမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဖေါင်ဒေးရှင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ (ပ) ၁၀၀ အိတ်+(ဒု) ၂၀၀ အိတ် = ၃၀၀ အိတ်။
၁၃။ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသ၊ တိုက်ပွဲရှောင်မိသားစုများသို့ ၁၀၀၀ အိတ်။
၁၄။ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ ချင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ တဆင့် လှူဒါန်းခြင်း ၁၀၀၀ အိတ်။
၁၅။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့် လှူဒါန်းခြင်း ၁၀၀၀ အိတ် (သီတဂူဆရာတော် ကိုယ်တိုင် ကြွရောက်လှူဒါန်းခြင်း)။ အထက်ပါ (၁၅) နေရာများသို့လည်း ဆန် ၆,၇၀၀ အိတ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၁၆။ ဘိရှော့ မာကိုတင်ဝင်း မန္တလေးမြို့ ခရိယာန်ချပ်ရ်ှကျောင်းသို့ ၁၆ . ၄ . ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆန်အိတ် ၁၀၀၊ ဆီ ၁၀၀ ပိသာ။
၁၇။ စစ်ကိုင်း၊ မင်းကွန်းမှ ရဟန်း၊ သာမဏေ ၈,၁၀၀ ပါး။ စစ်ကိုင်း၊ မင်းကွန်းမှ သီလရှင် ၆,၀၀၀ ပါး။ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာများ၊ အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများ၊
မသန်မစွမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများ၊ မျက်မမြင် ကျောင်းများတွင် မှီတင်း နေထိုင်ကြသူများ ၂,၁၅၀ ဦး စုစုပေါင်း ၁၆,၂၅၀ ဦးတို့အတွက် ၁၇ ၄ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆန် ၁၆,၂၅၀ အိတ်၊ ဆီ ၁၆,၂၅၀ ပိသာ ပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၁၈။ မန္တလေးမြို့ ၆ မြို့နယ်အတွင်းမှ ပရဟိတကျောင်း ၇၅ ကျောင်းများရှိ သာမဏေ၊ သီလရှင်များ အစရှိသည့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ၄,၁၉၂ ဦးတို့​အား (တစ်ပါး/တစ်ဦး) အတွက် ၃၀ ၄ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆန် ၈ပြည်၊ ဆီ ၅၀ကျပ်သား နှုန်းဖြင့် ဆန် ၂,၀၉၆ တင်း၊ ဆီ ၂,၀၉၆ ပိသာတို့ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
၁၉။ ရန်ကုန်တိုင်း ၂၉ မြို့နယ်မှ သီလရှင် ၂၀၁၃၄ ပါး အတွက် ဆန် ၂၀၁၃၄ တင်း၊ ဆီ ၂၀၁၃၄ ပိသာ တို့ကို ၈ ၆ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စတင်လှူဒါန်း ပေးခဲ့သည်။
၂၀။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ သံဃာတော်များသည့် စာသင်တိုက်ကြီး ၁၇ တိုက်တွင် သီတင်းသုံးကြသော သံဃာ ၄၁၅၄ ပါးအတွက် ဆန် ၄၄၁၅ တင်း၊ ဆီ ၄၁၅၄ ပိသာတို့ကို ၁၈-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့လှူဒါန်း ခဲ့ပါသည်။
၂၁။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ သုတဗုဒ္ဓ ဆရာတော်ဘုရားများ တည်ထောင်တော်မူသော ကျောင်းတိုက် ၁၃ တိုက်တွင် သီတင်းသုံးကြသည့် သံဃာ-၁၀၈၁ ပါးတို့အတွက် ဆွမ်းဆန်တော် ၁၁၀၆ တင်း၊ မြေပဲဆီသန့် ၁၀၈၁ ပိသာတို့ကို (၂၂-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
စုစုပေါင်းဆန် – ၅၁,၈၀၁ တင်း၊
စုစုပေါင်းပဲဆီ – ၄၃,၈၃၅ ပိသာ၊
မှတ်ချက် ။ ။ ဆန်များသည် တစ်တင်း ( ၁၆ ပြည် ) ၇၂ ပေါင် အိတ်များဖြစ်ပြီး ဆီမှာ အမေထွား ပဲဆီသန့် ဖြစ်ပါသည်။
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ ပါဝင်ကုသိုလ်ပြု လှူဒါန်းပေးကြသည့် အလှူရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးကြသူများ၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးတို့ကို သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ crd ; သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့